Description:Sarimihetsika mihetsika miloko,Sarimihetsika mihetsika marevaka,Fonosanana matevina
 HomeProductsSarimihetsika mihetsikaSarimihetsika mihetsika milokoLLDPE miloko fonosana miloko maro loko miloko
LLDPE miloko fonosana miloko marevaka miloko loko (antsoina koa hoe Film Stretch Wrapping Film, Filmethretene Colour Stretch Film) dia ampiasaina amin'ny entana manokana amin'ny fonosana ary ny entana sasany manohitra ny fangala-bolo, fomba iray manavaka azy ihany koa. Ny horonan-tsarimihetsika C olored dia manana loko mena, mavo, manga, mainty, misy loko maitso. C olorful horonantsary fitehirizana dia fanoherana maivana , anti-rano , fanoherana ny vovoka, fanoherana ny hamandoana. C fonosana vita amin'ny voaroy fonosana manontolo ny entana nefa tsy hianjera mandritra ny fitaterana. Ny fanomezana serivisy OEM sy ODM, dia afaka manamboatra fonosana vita amin'ny loko miloko samy hafa.
Product Categories : Sarimihetsika mihetsika > Sarimihetsika mihetsika miloko
Miloko plastika miloko pallet fonosana lamba Contact Now
Plastika LLDPE miloko Pallet mainty mitsivalana Contact Now
Hery mahery vaika avo Contact Now
Ny lokon'ny PE Stretch Film Hand Wrapch Contact Now
Wrap mainty miaraka amin'ny tànana Contact Now
fonosana fonosana fonosana lamba fonosana Contact Now
pallet fonosana horonan-tsarimihetsika 5 santimetatra Contact Now
film light wire sarimihetsika Contact Now
Sarimihetsika mihetsika miloko Sarimihetsika mihetsika marevaka Fonosanana matevina Sarimihetsika mihetsika Film miloko Sarimihetsika mihetsika miaro Sarimihetsika mihetsika Film Sarimihetsika mihetsika 3 Sarimihetsika mihetsika 25kg